Andro: 4 Oktobra 2019
Lalana Atabey Ferry Lalana sy vita
Ny kaominin'i Malatya Metropolitan dia namita ny asa fanitarana sy fanaovana asa fanaon'ny Battalgazi Atabey İskele. Ho fanampin'ny asa vaovao dia nanao ny fanarenana ny làlana efa misy arakaraka ny fenitra sy ny lalan'ny seranan-tsambo Atabey Ferry any amin'ny faritra Old Malatya. [More ...]
Ny fantsom-pifanarahana arabe vita amin'ny cylinder dia natomboka tao Ordu
Or Munisipaly Metropolitan Ordu dia nanomboka ny fampiharana Roller Compacted Concrete Road (RCC) izay manome fitahiry ny vidiny raha ampitahaina amin'ny làlana asfalt sy fomban-drazana ao amin'ny distrikan'i Eskipazar ao amin'ny distrikan'i Altınordu, saingy tena matanjaka kokoa amin'ny lafiny maharitra. Namboarina voalohany tao Ordu [More ...]
Centerambaşı Ski Center Miomana amin'ny vanim-potoana
Tiorkia Çambaşı miavaka mampiavaka ny maha-akaiky indrindra any an-dranomasina dia manomana ny vanim-potoana Ski Ski 2019-2020. Çambaşı Kayak izay hita ao amin'ny velaran-tany 2000 hekena ao amin'ny haavon'ny 650 an'i Ordu Metropolitan Municipality ary hita ao amin'ny 52 km lavitra ny afovoan-tanàna. [More ...]
Niova ny famerana ny haingam-pandeha any Antalya
Nitombo ny fetra haingam-pandeha havaozina. Noho ny fanapahan-kevitry ny Centalya Metropolitan Municipal Transportation Coordination Center (UKOME), ny fetra hafainganam-pandeha amin'ny làlana an-tanàn-dehibe dia voarindra indray. Ny halehiben'ny haingam-pandehan'ny 70 kilometatra dia ny kilometatra 82 amin'ny lalana sasany sy ny boulevards izay hita ao afovoan-tanàna. [More ...]
Ny fananganana bisy fitobiana bodrum dia miasa amin'ny fandrosoana
Ben'ny tanànan'ny Muğla Metropolitan Osman Gürün dia nanao fizahana tany amin'ny Station Bus Bodrum, izay eo am-panamboarana azy. Any amin'ny tanona metatra 30 arivo metatra ao amin'ny Torba Junction any Bodrum dia hitohy ny fananganana ary mitentina 759 Million TL. [More ...]
Haydarpaşa sy Sirkeci général général Tender! .. Jereo hoe iza no manao tolo-bidy!
Ny volavolan-tànana ho an'ny fanofana ny faritra sasany any Haydarpaşa sy Sirkeci toerana, izay tsy eken'ny Minisiteran'ny fitaterana ny fandraisana anjaran'ny IMM amin'ny filazàna hoe "miharihary". Ny IMM sy i Hesarfen Aviation dia nijanona teo amin'ny faran'ny ny tenda. Vaomiera Tender ao anatin'ny andro 15 an'ny fety [More ...]
Konya, Torkia, dia ho tonga ohatra ho bicycle Path
Uğur İbrahim Altay, Ben'ny tanànan'ny Konya Metropolitan, dia nandray anjara tamin'ny Forum Marmara International City Forum (MARUF) izay nitranga tao amin'ny Kongresin'ny Kongresy Istanbul. Ny Ben'ny tanàna Altay dia nanazava ny Konya sy ny Plan an'ny Master amin'ny bisikileta amin'ny forum izay hotanterahina eo anelanelan'ny Oktobra 1-2-3 miaraka amin'ny teny filamatra hoe "Cities produit Solutions,. [More ...]
Ny Andro Asphalt amin'ny alina sy ny sidina miasa any Izmit
Ny tanànan'i Kocaeli Metropolitan, distrika Izmit, Yahya Kaptan Firaisana ara-pandrosoana demokrasia dia manao asa fikojakojana ny lalana sy fanamboarana ny làlana. Ao amin'ireo asa notontosain'ny departemantan'ny siansa, ny ekipa, ny asphalt patch amin'ny alina, raha toa ny fanamboarana ny sisin-dàlana. asfalta [More ...]
Fiarovana ny tetikasa avy amin'ny indostrian'ny fiarovana an-trano
Tetikasa an-trano sy nasionaly eo amin'ny sehatry ny radar miaramila sy ny fiarovana sisintany, 2. Natolotra tao amin'ny International Military Radar and Border Security Summit 2, ny hany hetsika tokana manokana eo amin'ny sehatry ny tafika radara sy ny fiarovana ny sisintany. Radar and Military International [More ...]
E-5 asa dia ho tanterahina ao anatin'ny ambaratongan'ny tetikasa Kurbağalıdere Breeding
Ao anatin'ny faritry ny tetik'asa fanatsarana Kurbağalıdere, ny fizarana fizarana creek dia hotanterahina eo amin'ny faritra eo anelanelan'ny Göztepe Bridge Interchange sy Optimum Shopping Mall. Ny dingana ho vita dia ho vita ao anatin'ny sehatry ny fifamoivoizana ny asa dia hoentina mankany amin'ny làlan'ny serivisy vaovao. ISKI, iray amin'ireo mpiara-miasa ao amin'ny Kaominina Metropolitan Istanbul [More ...]
Avy amin'ny Ministera, Alert Channel Istanbul
Ny minisitry ny ala sy ny rano, tetikasa Terandran'i Canal Istanbul, Lake Terkos sy ny tohodranon'i Sazlıdere dia ho voaro amin'ny alàlan'ny filazana fa mety hihena ny fihoaran'ny Istanbul. Ny filoha lefitry ny CHP Muharrem Erkek; voajanahary, hazo, biby, ranom-boankazo noho ny fanofaan'ny herinaratra, [More ...]
Nahazo tsolotra ve ny Sapanca Cable Car Tender?
Bursa Cable Car Inc. Ny tale jeneralin'ny Burhan Ozgumus, ny kolikoly TL 1 tapitrisa ho an'ny ben'ny tanàna mba hahazoana ny tsaho malefaka dia manambara fa tsy marina izany, hoy izy. Ozgumus, nampanantenaina nandritra ny fitsidihany ny filohan'ny Sakarya Province CHP ny andro talohan'izay [More ...]
Ny nofin'ny lalana ropeway iray izay niandry ny fizahan-tany Kartepe sy Kocaeli dia miandry ny 50 taona indray. 10 Desambra 2018 dia tsy hahatratra ny 2020, izay datin'ny fandefasana ny ropeway ho an'ny lanonana fanarahan-tany. [More ...]
Navoakan'ny gazety TCDD Jeneraly Ali İhsan Uygun mitondra ny lohateny hoe Lar Rails Vavolombelona izay nanorina ny Repoblika ısında tao amin'ny gazetiboky Raillife tamin'ny Oktobra. Ity ny lahatsoratra momba ny TCDD GENERAL MANAGER UYGUN "3 Septambra hatramin'ny nanombohan'ny asa voalohany tamin'ny tsipika İzmir-Aydın amin'ny 1856 [More ...]
Ankara Sivas YHT Line Tapitra
Tao amin'ny gazetiboky Raillife tamin'ny Oktobra, Mehmet Cahit Turhan, minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa dia namoaka lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe "Ankara Sivas YHT Line Ended Hatt. AVY AMIN'NY MINISTER TURHAN olarak Amin'ny ministera, ny politikam-pitaterana fitaterana an-dalamby nanomboka tamin'ny 2003 [More ...]
BTS, tompon'andraikitra amin'ny lozam-pifamoivoizana!
Ny lozam-piaran-dalamby sy ny fahafatesan'ny machinista tamin'ny famoahana an-gazety nataon'ny Sendikan'ny Sendikàn'ny Serasera Amerikana Izmir, dia nitaky ny kaonty eo alohan'ny fitsarana. Ny fanambarana natao teo anoloan'ilay trano fitehirizam-bokin'i Halkapınar, namaky ny sekreteran'ny Sampana BTS Sensikası Izmir, Mehti Seyhan. [More ...]
Ilay mpanao gazety Mustafa Hoş, mpanao gazety Mustafa Hoş dia manao famotorana
Ny mpampanoa lalàna Galip Yılmaz Özkurşun, izay nijery ny raharaha loza tamin'ny fiaran-dalamby tao Çorlu, izay namoy ny ainy i 25, dia niatrika N nanendry ny fahefana ara-pitsarana tamin'ny fomba mazava ho an'ny mpanao gazety Mustafa Hoş izay efa nanara-maso akaiky ny loza hatramin'ny voalohany. [More ...]
Konya Metro dingana voalohany ny halehiben'ny tamin'ny Oktobra 2 2019 Alarobia in Ankara, Torkia, amin'ny alalan'ny lavitra ny ambony indrindra tsy miovaova "fanasana" natao tao amin'ny endriky ny dingana sy tsy misy filazana. Tale jeneralin'ny famatsiam-bolan'ny fotodrafitrasa eo ambanin'ny Ministeran'ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa [More ...]
Belsin City Hospital Rail Line Line dia tafiditra ao amin'ny programa momba ny fampiasam-bola
Ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena Hulusi Akar ary ny minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa Mehmet Cahit Turhan dia nitsidika an'i Kayseri. Nisy ny fivoriana nanaovana ny fandraisana anjaran'ny minisitra ary nampiantrano ny kaominin'ny Metropolitan. Memduh Büyükkılıç no [More ...]
News Archive Safidio ny volana Oktobra 2019 (350) September 2019 (555) August 2019 (508) Jolay 2019 (633) June 2019 (504) May 2019 (526) April 2019 (418) March 2019 (521) Febroary 2019 (483) Janoary 2019 (502) Range 2018 (620) Novambra 2018 (504) Oktobra 2018 (435) September 2018 (517) August 2018 (486) Jolay 2018 (506) June 2018 (581) May 2018 (467) April 2018 (545) March 2018 (554) Febroary 2018 (500) Janoary 2018 (557) Range 2017 (509) Novambra 2017 (427) Oktobra 2017 (538) September 2017 (455) August 2017 (505) Jolay 2017 (479) June 2017 (477) May 2017 (493) April 2017 (434) March 2017 (540) Febroary 2017 (477) Janoary 2017 (538) Range 2016 (487) Novambra 2016 (631) Oktobra 2016 (657) September 2016 (542) August 2016 (608) Jolay 2016 (485) June 2016 (661) May 2016 (664) April 2016 (700) March 2016 (804) Febroary 2016 (855) Janoary 2016 (751) Range 2015 (799) Novambra 2015 (640) Oktobra 2015 (624) September 2015 (428) August 2015 (493) Jolay 2015 (505) June 2015 (535) May 2015 (577) April 2015 (622) March 2015 (1017) Febroary 2015 (878) Janoary 2015 (1077) Range 2014 (963) Novambra 2014 (826) Oktobra 2014 (771) September 2014 (598) August 2014 (808) Jolay 2014 (911) June 2014 (735) May 2014 (957) April 2014 (972) March 2014 (864) Febroary 2014 (720) Janoary 2014 (733) Range 2013 (664) Novambra 2013 (656) Oktobra 2013 (548) September 2013 (570) August 2013 (533) Jolay 2013 (661) June 2013 (577) May 2013 (734) April 2013 (1059) March 2013 (1102) Febroary 2013 (811) Janoary 2013 (906) Range 2012 (911) Novambra 2012 (1168) Oktobra 2012 (830) September 2012 (886) August 2012 (974) Jolay 2012 (863) June 2012 (591) May 2012 (445) April 2012 (563) March 2012 (699) Febroary 2012 (546) Janoary 2012 (417) Range 2011 (149) Novambra 2011 (35) Oktobra 2011 (23) September 2011 (18) August 2011 (25) Jolay 2011 (18) June 2011 (16) May 2011 (13) April 2011 (13) March 2011 (33) Febroary 2011 (24) Janoary 2011 (13) Range 2010 (335) Novambra 2010 (12) Oktobra 2010 (15) September 2010 (12) August 2010 (16) Jolay 2010 (9) June 2010 (19) May 2010 (6) April 2010 (3) March 2010 (62) Febroary 2010 (303) Janoary 2010 (1838) Range 2009 (4) Novambra 2009 (1) Oktobra 2009 (3) September 2009 (3) August 2009 (2) June 2009 (3) May 2009 (2) April 2009 (3) March 2009 (9) Febroary 2009 (4) Janoary 2009 (3) Novambra 2008 (1) Oktobra 2008 (1) September 2008 (2) August 2008 (1) Jolay 2008 (2) June 2008 (2) May 2008 (2) April 2008 (1) March 2008 (3) Febroary 2008 (5) Janoary 2008 (2) Range 2007 (2) Oktobra 2007 (2) Jolay 2007 (1) May 2007 (1) April 2007 (1) Febroary 2007 (2) Janoary 2007 (1) Range 2006 (1) Oktobra 2006 (3) August 2006 (1) June 2006 (2) May 2006 (2) April 2006 (2) March 2006 (2) Novambra 2005 (2) August 2005 (1) June 2005 (1) March 2005 (2) Febroary 2005 (1) Janoary 2005 (1) Range 2004 (1) Oktobra 2004 (3) Jolay 2004 (1) May 2004 (2) Range 2003 (1) Oktobra 2003 (1) May 2003 (1) March 2003 (1) Febroary 2003 (1) Janoary 2003 (1) Range 2002 (1) Oktobra 2002 (4) August 2002 (1) April 2002 (1) March 2002 (2) Janoary 2002 (2) Jolay 2001 (1) June 2001 (1) March 2001 (1) May 2000 (3) March 1999 (1) Oktobra 1998 (2) March 1998 (1) August 1997 (1) Oktobra 1996 (1) August 1996 (2) May 1995 (1) August 1992 (1) May 1990 (1)